पार्टीका प्रदेश प्रमुखहरू- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
सरकारले ७ वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरूलाई हटाई नयाँ नियुक्ति गरेको विषय अहिले चर्चामा छ  । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले यो निर्णयको विरोध गरेको छ र यस्ता निर्णयले सत्तासीन नेकपा सर्वसत्तावाद लाद्न तत्पर रहेको जनाएको छ  ।
सत्तासीन नेकपा प्रदेश प्रमुखहरू सरकारले आफूखुसी राख्न पाउने अडानमा दृढ छ । जेसुकै भए पनि २०७४ को चुनावमा बेस्सरी पराजित भइसकेपछि नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी (केन्द्र) को सहमतिबिना प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति नगर्नुपर्ने थियो ।
कांग्रेसले मनलागी गरिसकेपछि अहिले आएर बिना कुनै कारण प्रदेश प्रमुखहरूलाई ओली सरकारले नहटाएको भए झनै राम्रो हुने थियो । स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूलाई प्रदेश प्रमुखको रूपमा नियुक्त गर्नुको साटो आफ्नै पार्टीका सक्रिय नेता/कार्यकर्तालाई प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर सरकारले नाङ्गो नाचको तमासा देखाएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै अघिल्लो सरकारका नियुक्तिहरू खारेज गर्ने परिपाटीलाई कुनै पनि हालतमा उपयुक्त भन्न सकिँंदैन ।
– एसपी बडु, कृष्णपुर–६, कञ्चनपुर
प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ ११:३८
बिहान चियाको सुर्कोसँगै कान्तिपुर हेर्दा मन विह्वल भयो  । कारणहरू धेरै छन्  ।
सुरुमै ‘डायलाइसिस कि प्रत्यारोपण ?’ मा आँखा पर्‍यो । यो शीर्षक मलाई नकारात्मक लाग्यो । यस्ता बिरामी देशभरि कति छन् कति ? किन पनि नकारात्मक लाग्यो भने देशको कार्यकारी सम्हालेको व्यक्तिको स्वास्थ्य बारेको सो खबर देश कति अशक्त ढंगले सञ्चालित छ भन्ने उदाहरण हो । अशक्त प्रधानमन्त्रीले कसरी देशलाई हाँक्न सक्छ र ? ‘सातै प्रदेश पमुख पदमुक्त’ यो अर्को अचम्मको खबर देखियो । कारण गत शनिबारसम्म सबै प्रदेश प्रमुखहरू लायक थिए, आइतबार एकाएक नालायक भए, खबरले सोही कुरा भनिरहेको थियो । हो, सरकारले राम्रो काम गर्ने अथवा नेतृत्व बहन गर्न नसक्ने बेठिक काम गर्ने जोकोहीलाई पुरस्कार, दण्ड, सजाय, बढुवा, खोसुवाजस्ता कारबाही गर्न सक्छ । तथापि सामाजिक सञ्जालको अध्ययनमा सो सूचनालाई आममानिसले नकारात्मक रूपमै लिएको पाइयो ।
‘यात्रुको भारले बस सुनकोसीमा’ तेस्रो समाचार ।
यो टिपोट लेखुन्जेल सो दुर्घटनामा १७ को मृत्यु र ५२ घाइते भन्ने आयो । अघिल्लो अंक कति बढ्ने र दोस्रो कति घट्ने हो, थाहा छैन । ७० यात्रु बोकेको अनुमान गरिएको छ । पत्रिकाले थप बोल्यो दसैंदेखि तिहारसम्म १ महिनामा सवारी दुर्घटनाबाट मात्र १ सय ३९ को मृत्यु भएको छ । तथ्यांक सत्य हो भने सरकार के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठिहाल्छ ।
‘तीन आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन पाएनन्’ । किनभने आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएनन् ।
ती नियुक्ति माथि चन्द्रलोकबाट हुनुपर्ने कि कताबाट हो ? ठूलो विडम्बना । ‘राजनीतिक आडमा ३६ गुन्डा नाइके’ अर्को समाचार । विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित गुन्डा नाइकेका नामहरू र संख्या उल्लेख भएको पाइयो । देश कति नकारात्मक दिशातिर उन्मुख छ, यस फेहरिस्तले प्रस्ट हुन्छ ।
यी सारा नकारात्मक समाचारको सट्टा सकारात्मक समाचार आइरहे हुने थियो । त्यसैले सरकार मलाई समाचार पढ्न मनलाग्ने बनाइदेऊ ।
– मुरारिविनोद पोखरेल, इमाडोल, ललितपुर